Shangri-la inopofumadza machira vagadziri & vatengesi - China Shangri-la inopofekedza machira fekitori
2020 Nyowani Chitatu Katatu Rukoko Jira Semi-Kusviba
Boka remicheka katatu machira akasarudzika mukugadzirwa uye akanaka muchitarisiko. Kubatanidza machira akatwasuka pakati pemachira maviri emicheka inogona kuchengetedza mukamuri kupfava. Dzorera banga kuti uchinje kusimba kwechiedza. Iyo yakasarudzika yekushongedzwa jira inogona kuchengetedza iwo ruvara kuenderana kwenguva yakareba. Shading yakasimba. Ultrasonic yekuchenesa machira inogona kushandiswa kuita kuti machira aite seakajeka seatsva.
Zvinoenderana nehunhu hwehutatu hutatu hwejira, inogona kukamurwa kuita semi-kudzima magetsi matatu jira jira uye kudzima magetsi katatu jira. Izvo zvinhu zvehutatu hutatu jira ndeye 100% polyester. Groupeve ane anopfuura makore gumi nematanhatu ane ruzivo rwekugadzira iyo yakanaka uye hightriple layer jira jira jira.
Yakasarudzika Mufashoni Shangri-La Bofu Mucheka Semi-Kudzima magetsi
Shangri-La inopofumadza chinhu chitsva dhizaini inosanganisa machira emagetsi, mawindo emawindo, venetian blinds uye roller blinds. Shangri-La anopofumadza pamusika anofanirwa kuenzanisa maviri anorema hunhu: kujekesa uye kusununguka. Kujeka kunonyanya kuratidzwa mukukora, chimiro uye neshinda yeiyo tambo mune mesh chikamu. Kana iyo yakajeka-yakajeka Shangri-La bofu yakavhurwa, mwenje unopinda mukamuri unowedzera uye wakapfava; kana yakavharwa, inogona zvakare kuvanza zvakavanzika zvakanaka. Chiyero chemakona akasununguka chinonyanya kuratidzwa padanho repolymerization yemahosi uye chikamu chakasimba cheshinda.
Yakakwira-mhando Groupeve shangri-La inopofumadza machira anogona kumira yakasimba simba kudhonza, uye haizogadzi inorema burrs mukushandisa kwemazuva ese. Muchidimbu, paunenge uchisarudza machira, ndapota teerera iwo mhando, ipapo chete ndipo paunogona kusarudza shangri-la inopofumadza machira anogutsa, akasununguka, uye akavimbika.
Yakareba Shangri-La Bofu Mucheka Semi-kudzima magetsi
Shangri-La inopofumadza chinhu chitsva dhizaini inosanganisa machira emagetsi, mawindo emawindo, venetian blinds uye roller blinds. Hupenyu hwekushandira hweShangri-La inopofumadza machira akareba, inopokana nekupisa uye kutonhora kwakadzika nekuda kwehunhu hwayo. Chaizvoizvo, dambudziko rekudzikiswa kwehupenyu hwebasa nekuda kwetembiricha yakaderera hazviitike munzvimbo dzine nguva yakareba yezuva kana tembiricha yakaderera yechando. Nenzira iyi, hupenyu hwebasa reiyo Shangri-La hwakawedzerwa zvakanyanya.
Kana iyo nharaunda nharaunda yakanakisa, mukuwedzera kune kudonha kwezuva nezuva uye kuchenesa diki diki reguruva pamucheka, inogona chaizvo kuita mhedzisiro yemakore anopfuura gumi ekushandisa.
Fekitori Kupisa Tengesai Shangri-La Sheer inopofumadza Mucheka 100% Polyester
Hupenyu hunobudirira asi hune ruzha, uye iwe unogara uchida kuve nerunyararo nerunyararo. Anoshamisa mapofu akaparadzanisa zvinyoronyoro nyika yekunze, ichisiya yakasarudzika nzvimbo yemoyo. Denga, tembiricha, uye mwenje wekugara zvichachinja zvinoenderana, uye hupenyu hunofanira kunge hwakangoita zvekupokana. Maitiro uye dhizaini ye dimming machira akapfuma uye akasiyana. Shangri-La sheer bofu iri fomu yechinyakare. Groupeve Shangri-La sheer inopofumadza machira akapfava sesilika, inoyevedza seshinda.
Yemafashoni Nyowani Dhizaina Katatu Rukoko Shangri-La Jira Semi-kudzima magetsi
Shangri-La inopofumadza (inozivikanwawo sheer blinds) imhando yemwenje-inodzora inopofumadza, iyo ine maviri emashizha akafanana neakawanda mashizha. Kana iwo mapofu akavharwa, iwo mapepa anonyanya kufanana nemapepa maviri, uye kana achivhurwa, iwo mashizha anosvika kune chinzvimbo chakatenderedza zvakanyanya kune iwo maviri machira. Pakati pavo, jira uye mesh zvinosanganiswa nemachira kana mamwe maitiro. Kana ese akavhurika, iwo matete maviri etulle akaenzana uye anoenderana kune mumwe nemumwe. Panguva ino, mwenje unodzikiswa kana uchipfuura nekukwirira kweimwe divi rejira. Enderera kugadzirisa kukwirira kwemaketeni, iwo mapofu anotenderera kumusoro neiyo yepamusoro axis.
Inoshandiswa zvakanyanya mudzimba, mahotera, maresitorendi, dzimba dzekugara, zvivakwa zvehofisi zvepamusoro-soro uye dzimwe nzvimbo. Kune iyo Shangri-La inopofumadza machira, hupamhi hwatinoita i3m, uye izvo zvinhu i100% polyester.
Imba Yakashongedza Horizontal Shangri-La Bofu Mucheka Semi-Kudzima magetsi
Shangri-La inopofumadza chinhu chitsva dhizaini inosanganisa machira emagetsi, mawindo emawindo, venetian blinds uye roller blinds. Shangri-La mapofu ndiwo akanakisa sarudzo yekuchengetedza zvakavanzika uye kudzora mwenje. Inoshandiswa zvakanyanya mumisha, zvivakwa zvehofisi, mafi, maresitorendi, mahotera nedzimwe nzvimbo. Shangri-La inopofumadza machira ane matatu-marara dhizaini, iyo inogadzirwa nemaviri akamira akarongedzwa mwenje-anotumira machira akabatana kune akati wandei matanda eanodzivirira mwenje pamatanho akaenzana.
Groupeve shangri-La inopofumadza machira akasarudzika mukugadzirwa uye akanaka muchimiro ayo akagadzirwa ne100% polyester. Kubatanidza machira akatwasuka pakati pemachira maviri emicheka inogona kuchengetedza mukamuri kupfava. Dzorera banga kuti uchinje kusimba kwechiedza. Iyo yakasarudzika mameseji shangri-La inopofumadza machira anogona kuchengetedza iwo ruvara kuenderana kwenguva yakareba. Shading yakasimba. Ultrasonic yekuchenesa machira inogona kushandiswa kuita kuti machira aite seakajeka seatsva.
Yemazuva Ano Dhizaini Roller Inopofumadza Shangri-la Mbizi Mucheka Wekumba
Shangri-La zebra inopofumadza chinhu chitsva dhizaini inosanganisa machira emagetsi, mawindo emawindo, venetian blinds uye roller blinds. Shangri-La mapofu ndiwo akanakisa sarudzo yekuchengetedza zvakavanzika uye kudzora mwenje. Inoshandiswa zvakanyanya mudzimba, mahotera, maresitorendi, dzimba dzekugara, zvivakwa zvehofisi zvepamusoro-soro uye dzimwe nzvimbo.
Groupeve Shangri-La inopofumadza machira haazove nematambudziko ekunamira, yero uye deformation. Shinda uye chirukwa zvinotengeswa kubva kunze kwenyika. Izvo zvakarukwa kamwechete panguva yekugadzirwa uye dzinoitwa basa rinotevera senge tembiricha yakakwira uye yakanyanya kumanikidza kuisa kuti iwane kukwirisa kwepamusoro-simba rejira. Zvatinounza haizi machira chete, asiwo maitiro kune hupenyu. Uyezve, roll yega yega yeshang-la zebra jira inoedzwa isati yatumirwa.
Hunhu Guarantee Shangri-La Sheer Anopofumadza Mucheka WeHofisi
Shangri-La sheer inopofumadza (inozivikanwawo sheer blinds) imhando yemwenje-yekudzora inopofomadza, iyo iine mapaundi akafanana machira ane akawanda mashizha. Ruvara rweGroupeve Shangri-La inopofumadza machira akachena uye akazara. Paunenge uchisarudza Shangri-La inopofumadza machira, chinhu chekutanga chinobata maziso evanhu mavara avo akachena uye kubwinya kuzere, ayo ese anotorwa kubva kune yakatumirwa shinda uye kuruka.
Kana vachisarudza machira, vatengi vanofanirwa kutarisisa kune zvese hunhu hweShangri-La sheer inopofumadza machira, uye ipapo chete ndipo paunogona kusarudza Shangri-La sheer inopofumadza machira anogutsa, akasununguka, uye akavimbika. Hazvina mhosva kuti nderupi rudzi rwaunoda, mahara emahara anowanikwa kwauri kuti utarise mhando uye sarudza ruvara.
Fekitori Hot Tengesa Triple Shade Shangri-La Roller Inopofumadza Mucheka 100% kudzima magetsi
Shangri-La roller inopofumadza inosanganisa mawindo emawindo, venetian blinds uye roller blinds, inova yemafashoni uye yakapfupika, mwenje unogona kugadziridzwa wakasununguka, unogona mumvuri asi usingavhare nzvimbo. Inoshandiswa zvakanyanya mudzimba, mahotera, maresitorendi, dzimba dzekugara, zvivakwa zvehofisi zvepamusoro-soro uye dzimwe nzvimbo.
Groupeve shangri-La roller inopofumadza machira anorapwa neisina mvura, chakuvhe-chiratidzo uye anti-static kurapwa-mushure mekugadziriswa kwakakosha, hazvisi nyore kuumba uye guruva, uye zviri nyore kuchenesa nekuchengetedza. Uye zvakare, semi-kudzima magetsi uye kudzima magetsi akateedzana eShangri-La roller inopofumadza machira anogona kuparadzira mwenje unooneka mukati, zvichideredza kushandiswa kwemwenje magetsi.Machira edu akapfuma muvara uye anotevedzera mafashoni epasi rese.
Simplicity Uye Elegance Shangri-La Mucheka 3m Hupamhi
Shangri-La inopofumadza inosanganisa mawindo ezvewindow, venetian blinds uye roller blinds, inova yemafashoni uye yakapfupika, mwenje unogona kugadziridzwa wakasununguka, unogona mumvuri asi usingavhare nzvimbo. Micheka yeGroupeve Shangri-La inorapwa isina mvura, chakuvhe-chiratidzo uye anti-static kurapwa-mushure mekugadziriswa kwakakosha, hazvisi nyore kuumba uye guruva, uye zviri nyore kuchenesa nekuchengetedza; Uye zvakare, semi-kudzima magetsi uye kudzima magetsi akateedzana eShangri-La blinds anoparadzira mwenje unooneka mukati, zvichideredza kushandiswa kwesimba remwenje. Ose ari maviri anogona kuvharira anopfuura 95% emayara anokuvadza eultraviolet uye kuchengetedza midziyo yemumba.
Katatu Shade Shangri-La Roller Anopofumadza Mucheka Wekudyira
Groupeve shangri-La roller inopofumadza machira akagadzirwa ne100% polyester, iyo upamhi ndeye 3m uye inorapwa isina mvura, chakuvhe-chiratidzo uye anti-static kurapwa-mushure mekugadziriswa kwakakosha, hazvisi nyore kuumba uye guruva, uye zviri nyore kuchenesa uye chengetedza; shangri-La roller inopofumadza machira zvakare anogona kunyatso kudzikisira mwaranzi yezuva inopinda mukamuri, nokudaro ichideredza kushandiswa kwesimba kwemhepo maekisesaizi nemimwe michina.